Bishii Diseembar 27th, 2020, ka dib shirkii dib-u-eegista sanadlaha ahaa, SIBO waxay abaabushay waxqabad horumarineed oo tayo sare leh oo loogu talagalay shaqaalaha aadka u fiican, si looga caawiyo inay si fiican u yaqaanaan naftooda iyo kooxda, loona dhiirrigeliyo horumarka kooxda. Tababbarka maalin dhan ka dib, in kasta oo jidhku daalan yahay, laakiin maskax ahaan ay leeyihiin goosasho wanaagsan, laakiin waxaa ka sii muhiimsan qof kasta oo shaqaale ah, kooxda si ay u yeeshaan faham cusub, taasi waa qof horumarinaya, isku kalsoonidu waa muhiim, iyo horumarinta shirkad, koox xamaasad leh ayaa sidoo kale lagama maarmaan ah.
Midka koowaad waa dhisme kooxeed. Koox waa koox ay sameystaan ​​dadka qaar si ay u gaaraan hadaf cayiman. Waa dadaalka qof kasta oo kooxda ka mid ah oo ka dhigaya koox inay si sax ah u socoto. Midda labaadna waa isku-xirnaanta. Qofna ma oga waxa ay noqon doonto hawsha xigta illaa kabtanku ku dhawaaqo hawsha xigta. Waqtigaan, waxaan u baahanahay inaan leenahay isku xirnaan wanaagsan, waana inaan ubaahan nahay inaan si firfircoon uga doodo una soo jeedino fikradaha. In kasta oo ay jiraan doodo iyo kala duwanaansho, haddana waxaan leenahay hal ujeedo oo keliya, taas oo ah, in aan dhammaystirno hawsha aan cidna loo hayn. Midda saddexaadna waa awoodda la isku dayo oo loo fuliyo. Marka hal hab uu ku guuldareysto, qaab kale ayaa isla markiiba ficil lagu sameyn doonaa. Marka dhammaan qaababka la isticmaalay, waxaan helnaa habka ugu macquulsan, oo ah muuqaalka isku dhafka isku dayga iyo fulinta.
Kadib kaqeybqaadashada horumarkan, qof kastaa wuu maqli karaa inta ugu badan waa soo koobid, waxaad dhahdaa tan ugu badan sidoo kale waa soo koobid, ka feker, soo koobidku ma ahan wax aan macquul aheyn, marka laga eego aragtida weyn, waxaa habooneyd inaan sameyno soo koobitaan yar noloshii hore , shaqadii isku dayga, fashilka iyo guusha soo koobitaanka. Shaqadayada iyo nolosheena, waxaa jira meelo aad u tiro badan oo u baahan in la soo koobo. Kaliya markaan soo koobo ayaan horumarin karnaa oo kaliya markaan horumar sameyno ayaan horumar ku gaari karnaa. Soo koobiddu waxay kuu oggolaaneysaa inaad ka faallooto wixii la soo dhaafay, inaad wajahdo ilaa hadda oo aad si muuqata u aragto mustaqbalka. Kaliya sidan oo keliya ayaa shaqadeennu ugu socon kartaa si joogto ah himilooyinka la dejiyey.
Waqtiga boostada: Feb-20-2021